Shaqaalaha Apple waxay maxkamad la tiigsan doonaan Ciyaaraha Epic | Waxaan ka socdaa mac
Shaqaalaha Apple waxay aadi doonaan maxkamad ka dhan ah Ciyaaraha Epic
Saabuunta opera ee udhaxeysa Apple iyo Epic Games waxay ku dhowdahay inay gaarto meesha ugu sareysa. Xiisad aad u tiro badan, dagaal iyo canaan dadweyne ayaa lahaan doona meesha ugu sarreysa maalinta dacwaddu bilaabmayso. Taasi waxay noqon doontaa bilowga dhamaadka waxaanan u maleyneynaa inaysan waqti dheer qaadan doonin in la ogaado cidda labada shirkadood ku saxan. Haddii Apple difaaceyso taasi ma sameynayso kaligi taliye ama Ciyaaraha Epic ee ku saabsan rabitaankooda ah inay noqdaan "bilaash". Si kastaba ha noqotee, mid kastaa wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu ka doodo kiiskiisa Apple ayaa horay u soo bandhigtay cidda mas'uulka ka noqon doonta difaaca shirkadda. Shaqaalaha Apple ayaa dacwad ku socota.
Apple waxay soo bandhigtay liistada markhaatiyaasha maxkamadaynta soo socota ee ka dhanka ah Epic Games. Dhowr maamule oo Apple ah inay markhaati furaan, oo uu ku jiro agaasimaha guud ee Apple Tim Cook, saaxiibkiisa Apple Phil Schillery, iyo madaxweyne ku xigeenka sare ee injineernimada barnaamijka Apple, Craig Federighi. Liiska markhaatiyada Apple waxaa sidoo kale ku jira madaxweyne ku xigeenka dukaanka app Matt Fischer. Madaxa Halista iyo Khiyaanooyinka Algorithms-ka Eric Friedman. Agaasimaha Ganacsiga iyo Lacag bixinta Eric Gray. Maareeyaha Horumarinta Ciyaaraha Mark Grimm iyo shaqaalaha kale ee suuqgeynta, xiriirka horumariyaha, iyo dhinacyada la xiriira.
Maamulaha guud ee shirkaddu wuxuu noqon doonaa kan waqtiga badan geliya ka jawaabista su'aalaha dhinacyada. Cook iyo Federighi waxaa la filayaa in la hubiyo oo ay ka jawaabaan su'aalaha ugu yaraan dhowr saacadood. Hadda, Schiller, oo mas'uul ka ah App Store, ayaa markhaati ka noqon doona inta lagu jiro wadar ahaan 10 saacadood.
Maamulayaasheena sare waxay rajeynayaan inay la wadaagaan maxkamada saameynta wanaagsan ee App Store ku yeeshay hal-abuurnimada. Sidoo kale dhaqaalaha adduunka iyo khibrada macaamiisha 12-kii sano ee la soo dhaafay. Waxaan ku kalsoonahay in kiiskaasi uu muujin doono taas Epic waxay si ula kac ah u jebisay heshiiskoodii kaliya si loo kordhiyo dakhligooda, taas oo ah waxa ka dhashay ka bixitaankoodii App Store. Markii sidaas la samaynayay, Epic waxay hareer martay astaamaha amniga ee Dukaanka App qaab u horseedi kara tartan yar iyo gelitaanka asturnaanta iyo amniga macluumaadka macaamiisha qatar aad u weyn.
Markhaatiyaasha Epic waxaa ka mid ah Maamulaha Ciyaaraha Epic Tim Sweeney iyo shaqaalaha kale ee Epic, iyo markhaatiyaasha dibedda waxaa ku jiri doona maamulayaal ka socda Facebook, Microsoft, Nvidia iyo madaxii hore ee software-ka iOS Scott Forstall. Epic wuxuu yiri bishii Febraayo inay iskudayeyso inay laxiriirto Forstall, laakiin ay ku adkayd helitaankiisa. Epic wuxuu qorsheynayaa inuu waco Forstall sababo la xiriira ka qeyb qaadashadiisii ​​App Store ka hor inta uusan ka tagin shirkadda sanadkii 2013.
Maxkamadeynta ayaa bilaaban doonta Isniinta, 3 May. Waa tijaabo fool ka fool ah laakiin ma jiri doono xeerbeegti ku lug leh. Horaantii bishaan, garsoore Yvonne González ayaa riixday in si shaqsi ah loo maxkamadeeyo, iyadoo sheegtay in kiiska uu yahay "mid muhiim ah oo ku filan" in maxkamada ay qof ahaan ku dhageysato Dhammaan tallaabooyinka nadaafadda iyo amniga ee nadaafadda ee jira ayaa loo hoggaansami doonaa si loo dammaanad qaado in qofna uusan ku dhici karin cudurka Coronavirus.
Wax ka yar laba bilood ka dib ayaa hadhsan in maxkamadaynta muddada dheer la sugayay ay bilaabato. Inbadan ayaan ka hadalnay sabradan opera, maxaa yeelay waxyaabo badan ayaa laga sheegayaa. Way ka muhiimsan tahay sida aan u maleyn karno, maxaa yeelay haddii ay dhacdo Ciyaaraha Epic inay guuleystaan, waxay calaamadeyn doontaa hab cusub oo wax looga arko Apple. Intaas waxaa sii dheer waxaad la kulmi doontaa tiro aan dhammaad lahayn oo dalabyo isku mid ah oo ka imaan doona dhammaan tartamayaashaada iyo kuwa horumariya heer kasta. Uma maleynayo in Apple uu soo galayo "aubergines" iyadoon dhabarkooda si fiican loo qarin oo aan la ogeyn waxa ay sameynayaan marwalba.
Waxaan aad u dhug yeelan doonnaa si aan u aragno sida dhacdooyinku u dhacaan qaasatan markay timaado dhagaysiga dacwada, layaabi maayo hadii daqiiqadii ugu danbaysay ay timaado layaab. Gaar ahaan Ciyaaraha Epic. Dhacdo cusub oo ka dhacday Fortnite ama ku dhawaaqid cusub ... wax baa laga yaabaa inay yimaadaan. Waa ugaarsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Shaqaalaha Apple waxay aadi doonaan maxkamad ka dhan ah Ciyaaraha Epic
Ka dib markii Apple joojisay iMac Pro waa la iibiyey halka alaabtu ugu dambeysay